လင်္ကာ: ကျောင်းသားတပ်မတော်သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်(၁၉၉၂ မတ်) မိုးသီးဇွန်
ကျောင်းသားတပ်မတော်သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်(၁၉၉၂ မတ်) မိုးသီးဇွန်
မြန်မာစစ်ထောက်လှမ်းရေးဟု အစွပ်စွဲခံရသော (၁၅) ဦးကို သတ်ဖြတ်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ABSDF မှ
သဘောထားထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်(ABSDF led by Moe Thee Zune)
မတ်လ ၈ရက် ၁၉၉၂ ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများနှင့် ကျောင်းသားတပ်မတော်၏ ညီညွတ်
မှုကိုအလေးထားသောအားဖြင့်ဦးစွာ(ကျနော်တို့ သည်) ကျောင်းသားတပ်မတော်နှစ်စုကွဲသွားပြီဖြစ်ကြောင်း
ကို ၀မ်းနည်းစွာအသိပေးပြီး ယခု ကြေငြာချက်ကိုထုတ်ပြန်ရပါသည်။
သို့ သော် မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီရေး တိုက်ပွဲကို ထောက်ခံစာနာနားလည်ပေးသော ပြည်တွင်းပြည်ပအင် အားစုများ၏အရည်အသွေးကို နိမ့်ကျတန်ဖိုးမဲ့စေသောအကြောင်းရင်းများကို ဖြေရှင်းရန်ဆန္ဒထားပြီး ဒီမို ကရေစီတော်လှန်ရေး ရေရှည်အကျိုးစီးပွားရေးကို ဦးထိပ်ထားသော (ကျနော်တို့ သည်) ABSDF ကျောင်း သားတပ်မတော်၏ မူရင်းအခြေခံဥပဒေတွင် ဗဟိုကော်မတီအဆင့်ထက် အဆင့်နိမ့်သောလက်အောက် စခန်းများ၊ တပ်ရင်းများတွင်လူသတ်အပြစ်ပေးခြင်းအား တားမြစ်ထားသောအချက်ကို ထောက်ပြ သုံးသပ် ရမည်ဖြစ်သည်။
မြန်မာပြည်သားတို့ ၏ လူ့ ဂုဏ်သိက္ခာ၊လူသားဘ၀၊လူ့ တန်ဖိုး နှင့် လူ့ အခွင့်အရေးများကို(ကျနော်တို့သည်) တန်ဖိုးထားသောကြောင့် လူအချင်းချင်းရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာ၊လူမဆန်စွာနှိပ်စက်ဖျက်ဆီး၊ ဂုဏ် သိက္ခာမဲ့စေသောဆက်ဆံခြင်း၊အပြစ်ပေးခြင်းများကို ဆန့် ကျင်ရမည်ဖြစ်သည်။
လူအချင်းချင်း ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာ လူမဆန်စွာနှိပ်စက်ခြင်း၊ ဂုဏ်သိက္ခာမဲ့စေသောဆက်ဆံခြင်း၊ အပြစ် ပေးခြင်းများကို ဆန့် ကျင်ပြီး ထိုသို့ ဆက်ဆံခံရသူများအား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုပေးသော ကုလ သမဂ္ဂ၏ အထွေထွေဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် -၃၄၅၂(၁၉၇၅ ခုနှစ်၊ဒီဇင်ဘာ ၉ရက်)ကို ကျနော်ထောက်ခံသည်။
ကျောင်းသားတပ်မတော်အဖွဲ့ ဝင်အားလုံး သဘောတူညီမှု၊နားလည်မှုမပါပဲ သူလျှိုဟုစွပ်စွဲခံရသူများအား သတ်ဖြတ်ခြင်း၊အရေးယူခဲ့သော ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တခြားအောက်ခြေရဲဘော်များ လုံခြုံရေးကိုပါ ကျနော် တို့ အထူးစိုးရိမ်ကြောင်း ပြောကြားလိုသည်။
ဘန်ကောက်နေးရှင်းသတင်းစာ( မတ်လ ၁၊ ၁၉၉၂) အရသူလျှိုဟု စွပ်စွဲ၍ အသတ်ခံရသော လူ ၁၅ ယောက်တွင် အမျိုးသမီးရဲမေ တဦးပါဝင်ခဲ့ခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်ပြီး (အောင်ထူး-ယခု BLC ထုတ်ပြန်သော March 1, 1992 ကြေငြာချက်)တွင် အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။
ကျနော်တို့ သည် လက်ရှိကျောင်းသားတပ်မတော်မြောက်ပိုင်း အကျဉ်းထောင်တွင် ဆက်လက်ဖမ်းဆီး ထား သော လူ ၆၅ ဦးကို ညှင်းပမ်းနှိပ်စက် တရားစီရင်ခြင်းများ ချက်ခြင်းရပ်တန့် ရန် ကျနော်တို့ မှ တောင်း ဆိုလိုက်ပါသည်။
အလားတူပင် DAB အဖွဲ့ ဝင်များကလည်း အားလုံးအတည်ပြုထောက်ခံသည့် DAB တရားစီရင်မှုများကို စံထား၍(ဖြစ်ပျက်ခဲ့သောကိစ္စကို DAB ခေါင်းဆောင်များမှ ပြန်လည်သုံးသပ်ပေးပါရန် ကျနော်တို့မှ တောင်းဆိုလိုက်ပါသည်။
လူ့ အခွင့်အရေးချိုးဖောက်သည့် မြန်မာစစ်အာဏာပိုင်များကို ကျနော်တို့ တွန်းလှန်တိုက်ပွဲဝင်ရာတွင် လူ့ အ ခွင့်အရေးဆိုသောစကားလုံးသည် စကားလုံးသက်သက်မျှမဟုတ်ပဲ လူမျိုးမရွေး၊ ဒေသမရွေး လက်တွေ့ကျင့်သုံးရမည်ဟု ကျနော်တို့ မှယုံကြည်ပါသည်။
သို့ ကြောင့် ကျောင်းသားတပ်မတော်အတွင်း ပိုမိုမြင့်မားသော ဗဟိုတရားရုံး၏ ခွင့်ပြုချက်နှင့် သိနားလည် မှုမပါပဲ တပ်ဖွဲ့ ဝင်အမြောက်အများကို သူလျှိုဟုစွပ်စွဲပြီး အလျင်စလိုသတ်ဖြတ်အရေးယူခြင်းအပေါ် ကျနော် တို့(မိုးသီးဇွန်) ဦးဆောင်သော ကျောင်းသားတပ်မတော်အဖွဲ့ မှ အထူးသံသယဖြစ်မိပါသည်။
ထို့ ကြောင့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သောကိစ္စများကို သွေးရိုးသားရိုး ပုံမှန်မဟုတ်ဟု ကျနော်တို့ မှ ထင်မြင်ဖြစ်သည်။ အလားတူပင် ယုံကြည်အားထားလောက်သည့် ခိုင်မာသောအထောက်အထားမရှိပဲ သူလျှိုဟုစွပ်စွဲခံရသော ရဲဘော်များအားကွပ်မျက်သည်အထိ လုပ်ဆောင်မှုများအားလုံးတွင် အမှားပေါင်းများစွာ ပါဝင်နေသည်။
အထက်မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားမှုတွင် အလွန်ထင်ရှားသော ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုထွန်း အောင်ကျော်အား စွပ်စွဲခံရသော သူများ၏ သူလျှိုခေါင်းဆောင်ဟုသတ်မှတ်ခဲ့ခြင်းသည် ကြီးမား သောအမှားတခုဖြစ်သည်။
စစ်အာဏာရှင်အကြိုက်ဖြစ်မည့် မိမိကျောင်းသာတပ်မတော်အဖွဲ့ ဝင်အချင်းချင်း မညီညွတ်ရာမှ တဦးနှင့် တဦး သားကောင်ပြု အနိုင်ကျင့်ခြင်းကို ဒီမိုကရေစီလိုလားသော ပြည်သူများနှင့် ကျောင်းသားတပ်မတော် အဖွဲ့ ဝင်အားလုံး သတိကြီးစွာထားရန် မိမိတို့ မှတိုက်တွန်းလိုက်သည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုအရေးတော်ပုံကြီး၏ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်အတူတကွ ကျောင်း သားတပ်မတော်အဖွဲ့ ဝင်အားလုံး၏ ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် ပုံရိပ်ကို ကြီးမားသည့်အမဲစက်ဖြစ်စေခဲ့သည် ကိစ္စအ အပေါ်တွင် ကျနော်တို့ ဖက်မှ အထူးစိုးရိမ်မိကြောင်း ပြောကြားရင်း ယခုသဘောထားထုတ်ပြန်ချက်ကို ထုတ်ပြန်ပါသည်။
(Moe Thee Zun)
ALL BURMA STUDENT'S DEMOCRATIC FRONT
ကိုမိုးသီးဟာ အဲဒီအချိန်တုန်းက အဲလိုပြတ်ပြတ်သားသား စတိတ်မန့် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ခုချိန်ကျမှ ဘာလို့ အသတ်ခံရသူတွေဖက်က ရပ်တည်ပြီး အမှန်တရားပေါ်ပေါက်အောင် မဆောင်ရွက်တာလဲဗျ။ ကျနော်တို့လို လူငယ်မျိုးဆက်တွေအနေနဲ့ ယုံထင်ကြောင်ထင် ဖြစ်စေတယ်။ နဂိုကတည်းက ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတချို့ကို မယုံကြည်ခဲ့ဘူး။ ကျောင်းသားတပ်ကိုတော့ ချွန်းချက်နဲ့ ယုံကြည်ခဲ့တယ်။ ဒီကိစ္စကြီးပေါ်လာတော့ ကျောင်းသားတပ်နဲ့ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဆိုသူတွေကို ယုံကြည်မှုပျက်ပြားလာခဲ့ဘီ။ တကယ်ဆို ခေါင်းဆောင်ဆိုတာ အဖွဲ့အစည်းတခုရဲ့ ဆိုးမွေး ကောင်းမွေအကုန်လုံးအပေါ်မှာ တာဝန်ရှိရတယ်။ တာဝန်ယူရတယ်လို့ ကျနော်ကတော့ယူဆတယ်။ ဒေါက်တာနိုင်အောင်ကိုတော့ နဂိုတည်းက ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလေးစားမှု လုံးဝမရှိဘူး။ အခုလဲ ဒီငနဲနှုတ်ဆိတ်တုန်း၊ အဓိကတရားခံတွေကိုတော့ထားလိုက်တော့၊ မြေလျှိုးလို့မိုးပျံရင်တောင် နေစရာရမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒီအမှုက သကြားမင်းရော ယမမင်းဆီကိုရော အားလုံးရောက်နေပီးဘီ။ ဒင်းတို့အတွက် ဒီဝသုန်မြေမှာ နေရာလွတ်မရှိစေရ။ အဲဒီအချိန်မှာ အဓိကတာဝန်ရှိနေတဲ့ ခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့ လူတွေ(လူတွေလို့တောင်မပြောချင်တော့ဘူးဗျာ) တခုခုတော့ ပြောသင့်နေဘီလို့ မြင်ပါတယ်။ အဲဒါမှမဟုတ်ယင်တော့လဲ ခင်ညားတို့ ကိုယ်လည်ပင်းကိုယ် ကြိုးကွင်းစွပ်လိုက်ကြပါတော့။ ခင်ညားတို့ လောကကြီးမှာ ရှိမနေသင့်တော့ဘူး။ တော်ဘီဗျာ..... တော်တော်ဒေါသဖြစ်သွားဘီ။
MrMaung KoThet ‎"၁၉၉၂ ခု မတ်လက ကျောင်းသား ၁၅ ယောက်ကို ခေါင်းဖြတ်သတ်အပြီး ကိုမိုးသီး ထုတ်ခဲ့သော statement." ဆိုတာ ဘယ်လို သက်သေရှိပါသလဲ။ အခုမှ ကတိုက်ကရိုက်ထပြီး ရိုက်ထားတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားခင်ဗျာ။ တကယ်လို့ အဲဒီstatement ရဲ့ မူလ Copy ရှိရင်တင်ပေးစေချင်ပါတယ်။ကျနော်မမှားရင် ၉၂တုန်းက အခုတွေ့တဲ့ statement မှာသုံးထားတဲ့ စာလုံးပုံစံမထွက်သေးပါ။ ကျေးဇူးပါ။
Sliv Mmc ကျမတွေ.နေရတာကတော့ ခေါင်းဆောင် မ ဟုတ်ပဲ ခေါင်းရှောင်ဖြစ်နေကြတာပဲ ။ ခေါင်းဆောင်ကောင်းဆိုတာ ကိုယ်တာဝန်ယူစဉ်ကာလမှာ ကိုယ်သိလျှက်ဖြစ်စေ ၊ မသိလိုက်ပဲ ဖြစ်စေ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကို ခုချိန်မှာ သက်သေ အထောက်အထားနဲ.တကွ ဖော်ထုတ်ပြောပြနေကြတာကို တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးရမယ် ။ ဒီမိုကရေစီ နဲ. လူ.အခွင့်အရေး အတွက် တိုက်ပွဲဝင်န်ေတဲ့သူတွေက ဒါတော်လှန်ရေးလုပ်တာ ၊ သတ်တာဘာဖြစ်လဲဆိုတာကြီးကတော့ တော်တော့ကို အော့နှလုံးနာစရာပါပဲ ။ ပြီးတော့ ABSDF နှစ်ဖွဲ.ကွဲတာဟာ ဒီလူသတ်မှု.ကြောင့် ကွဲတာမဟုတ်ပဲ အာဏာလုလို.ကွဲတာ ကို မိုးသီးဇွန်ရဲ့ အင်တာဗျူးမှာ လူသတ်မှု.ကြောင့် ကွဲတာပါလို. ပြောသွားပါတယ် ။ ဒီရေးနေတဲ့သူတွေကိုလည်း သူမသိသယောင် ပြောသွားပါသေးတယ် ။ အဆိုးဆုံးကတော့ သူ.အဖွဲ.ဝင်မဟုတ်ခဲ့သူကို လွဲမှားပြောဆိုသွားတာကတော့ ရုပ်ဆိုးလှပါတယ် ။ ဒီလို ခေါင်းဆောင်လက်အောက်မှာ နေခဲ့ကြရတဲ့ ကျောင်းသားများဘဝ ကံဆိုးလှပါ၏ လို.သာတွေးရင်း .......
စိုင်းစိုင်း၊ ဖွေးဖွေး တို့ရိုက်ကူးထားတဲ့ "ရည်းစားတစ်ဝမ်းကွဲ" ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား အထူးပွဲ
Pengertian Withdraw dan Deposit Bola Online